पोखरा, २० असार। युनाइटेड क्लबले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत कालिका पब्लिक कलेज रामबजारमा छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ। क्लबले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कालिका पब्लिक कलेजमा अध्ययनरत २ जना छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो। क्लबले कालिका पब्लिक कलेज मानविकी संकाय स्नातक तह पहिलो वर्षमा अध्ययनरत सुरेन्द्र शाही र ब्यवस्थापन संकाय स्नातक तह पहिलो वर्षमा अध्ययनरत अन्जु गिरीलाई छात्रवृत्ति स्वरुप जनही १५ हजार… पुरा पढौ
कास्की प्रहरी प्रमुख रानालाई स्वागत
पोखरा, १८ असार। सुनचाँदी व्यवसायी संघ कास्कीले कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानालाई स्वागत गरेको छ। हालैमात्र जिल्लामा सरुवा भइ आएका प्रहरी उपरीक्षक रानाले शान्तिसुरक्षालाई थप मजबुद बनाउने बताए। त्यस अवसरमा नेपाल सूनचाँदी व्यवसायी महासंघका सदस्य दुर्गाबहादुर सुनार, चन्द्रकिशोर गौतम, बुद्विबहादुर गहतराज, संघ कास्कीका संरक्षक महेन्द्रमान गुभाजु, सदस्य दशरथ सुनारले बोलेका थिए। संघ कास्कीका अध्यक्ष निर्मल दियालीको अध्यक्षतामा भएको… पुरा पढौ
पोखरा, १८ असार।सिर्जना आवासीय मावि पोखराले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरेको छ। ब्रिटिस काउन्सिलले कनेक्टिङ क्लास रुम परियोजना अन्तर्गत सन् २०१७/१८ मा नेपालका १९ वटा विद्यालयलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो। उक्त अवार्ड पाउनेमा कास्कीका दुर्इ विद्यालयमा निजीतर्फ सिर्जना मावि र सामुदायिकतर्फ अम्बिका मावि रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिकाइबाट अवलम्बन गरी विद्यार्थी र शिक्षकलाई आधुनिक शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामासामेल गराई त्यसका माध्यमबाट सीप… पुरा पढौ
पूर्व मेयर गुरुङको स्मृति
पोखरा, १८ असार। तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्कबहादुर गुरुङको १४ औं स्मृति दिवसमा सोमवार पोखरामा सामुहिक दीप प्रज्ज्वलन गरिएको छ। पोखरा एयरपोर्ट हर्कचोकमा रहेको गुरुङको शालिकमा पुष्पमाला अर्पण गर्दै विभिन्न महानुभावले उनको स्मरण गरे। स्व. गुरुङकी धर्मपत्नी रत्ना गुरुङले दीप प्रज्ज्वलन गरेर उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेकी थिइन्। स्व. गुरुङको योगदान बारे प्रकाश पार्दै बाह्रबिसें पैंगीलामा परिवारका प्रमुख सल्लाहकार क्या.… पुरा पढौ
भक्तपुर, ९ असार । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसर्इइ) अर्थात कक्षा १० को परीक्षाफल शनिबार राति सार्वजनिक गरेको छ । नतिजाअनुसार नियमिततर्फ १४ हजार २ सय ३४ विद्यार्थीले जिपिए ३.६५ देखि ४ (ए प्लस), ४६ हजार १ सय ३० विद्यार्थीले जिपिए ३.२५ देखि ३.६० (ए), ४९ हजार ३७ जना विद्यार्थीले जिपिए २.८५ देखि ३.२० (बि प्लस), ७०… पुरा पढौ
पोखरा, ९ असार । एसओएस बालग्राम गण्डकीले विविध कार्यक्रम गरी ३२ औं अन्तर्राष्ट्रिय एसओएस दिवस मनाएको छ। बालग्रामलाई सहयोग गर्ने सहयोगदातालाई बालग्रामले सम्मान गर्‍यो। बालग्राममा रहेर २५ वर्ष बढी सेवा गरेका कर्मचारी बुद्धिमान ठकुरी र काजिमान तामाङलाई दोसल्ला ओढाएर बालग्रामले सम्मान गरेको थियो। त्यसैगरी, बालग्राममा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई शैक्षिक तथा अतिरिक्ति क्रियाकलापको पुरस्कार वितरण गरेको थियो। प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका… पुरा पढौ
पोखरा, ९ असार । सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा बगर र महिला उद्यमी संघ कास्कीको संयुक्त आयोजनामा शनिवार पोखरा १ मा प्रस्तावना लेखन तालिम सम्पन्न भएको छ । तालिममा ६५ जना महिला सहभागी थिए । तालिममा सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा बगर र महिला उद्यमी संघ कास्कीकी सल्लाहकार सीता गुरुङले सहजीकरण गरेकी थिइन् । तालिम उद्घाटन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइरालाले महिला… पुरा पढौ
हेमजा, ९ असार। पोखरा-२५, हेमजामा टेकबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा वडास्तरीय दलित सञ्जाल पुनर्गठन गरिएको छ। जसको उपाध्यक्षमा शिव नेपाली, सचिवमा सुनिल गायक, कोषाध्यक्षमा मञ्जु नेपाली, सहसचिवमा ध्रु्रव परियार तथा सदस्यमा दुर्गाकुमारी विक, कृष्णबहादुर नेपाली, डम्बरबहादुर सार्की र रीता गायक रहेका छन। रिक्त २ सदस्य पछि थप हुनेछन्। नवगठित समितिलाई बधाई ज्ञापन गर्दै प्रमुख अतिथि वडाध्यक्ष शोभाकर तिम्सिनाले पहिलेका सञ्जालभन्दा यस सञ्जालले… पुरा पढौ
हेमजा, ९ असार। सामुदायिक सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा हेमजाको आयोजनामा शनिवार स्थानीय लामाचौतारादेखि तिव्वतीयन क्यामको भित्री सडक सरसफाइ गरिएको छ। योसँगै केन्द्रले गरेको सरसफाइ अभियान तेस्रो सातासम्म आइपुगेको छ। वडाध्यक्ष शोभाकर तिम्सिनाको प्रमुख उपस्थितिमा भएको सो कार्यक्रममा संकलित फोहर महानगरपालिकाको फोहर संकलन गर्ने गाडीमा व्यवस्थापन गरिएको थियो। वडाध्यक्ष तिम्सिनाले आफ्नो गाउँटोल आफै सफा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।उक्त कार्यक्रममा हेमजाका… पुरा पढौ